Shiinaha Cusub PP 1L, 3L, 5L, 6L, 10L, 20L baaldi oval rinji caag ah oo leh Soosaar Dabool iyo Warshad |JIATAI
PP cusub 1L, 3L, 5L, 6L, 10L, 20L baaldi oval rinjiga caag ah
TAXANAHA: Taxanaha Foosto Oval
CODKA: 1L, 3L, 5L, 6L, 10L, 20L
CASMIYADDA: Summada La Habeeyay (MOQ: 1000PCS)
Xidhmo la habeeyey (MOQ: 1000PCS)
JT-S01 1L 165*146*115 Daabacaadda xariirta, Daabacaadda wareejinta kulaylka, Ku qorista caaryada daabacaadda (IML).
JT-S10 10L 344*295*236
JT-S20 20L 395*345*313
Taxanahan foosto oval ah ayaa lagu bixiyaa 6 awood oo kala duwan.Waxay ahayd gaar ahaan mugga yar ee ku habboon dareeraha iyo alaabta kiimikada.Baaldiga balaastiigga ah ayaa leh miisaan fudud, meel bannaan oo gudaha ah oo shaqaynaysa kaas oo ka yar oo ka waxtar badan.Aad bay u fududahay in la raro oo la guuro marka loo baahdo gaadiid.Waxay leedahay caabbinta daxalka wanaagsan ee acids, alkalis iyo kiimikooyinka kale, iyo xasiloonida kiimikada ayaa xitaa ka fiican dahabka.Xoogga sare ee gaarka ah sidoo kale waa sifada muuqata ee baaldi oval, kaas oo bixin kara qaabab badan oo kala duwan, oo waxtar u leh ku habboonaanta nolol maalmeedkeena.
Xirmooyinka warshadaha kiimikada: Wakiilka dahaarka, wakiilka midabka, wakiilka ka hortagga, wakiilka kor u qaadida, wakiilka Emulsifying iyo wixii la mid ah.
Xirmooyinka warshadaha cuntada: Waxyaalaha cuntada lagu daro, wax soo saarka digirta, khudradda la ilaaliyo, kalluunka, qolofleyda, caano qallalan oo la qalajiyey iyo wixii la mid ah.Mugga 1L ilaa 20L ayaa ah awood ku habboon in wax loogu xidho.Isticmaalka baaldi caag ah oo afargees ah ayaa aad uga badan tan.
Xidhmada kiimikaad & cuntada, kaydso oo cusbo, iwm.
Kiimiko leh dareere
Hore: Caddaan Caadiga ah & Madaw 18L/20L/33L Xanaaq Caag ah oo Cad Baaldi Wareega ah
Xiga: Jalaatada heerka cuntada 1.5L, 2L, 3L, 5L, 10L, 20L baaldi caag ah oo afar gees leh